६४ मेगापिक्सल क्यामेरासहितको एम ४१ मोबाइल ल्याउँदै सामसङ आइतवार, असार २१, २०७७
टिकटकसहित ५९ चर्चित चिनियाँ एप प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय सोमवार, असार १५, २०७७
सिमकार्ड किन्दा सक्कली काजगात चाहिने शुक्रवार, असार १२, २०७७
लोकसेवामा आउने सम्भावित प्रश्नोत्तरहरु वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम आयोजना हो । शनिवार, चैत्र १, २०७६
खरिदारका लागि नयाँ पाठ्यक्रम (नमुना प्रश्नहरूसहित) लोकसेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्छ ? लोकसेवा आयोगले हालै खरिदारका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। खरिदारको परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ? शनिवार, चैत्र १, २०७६
आफूले चलाएको मोबाइल कसको नाममा छ ? यसरी थाहा पाउनुस् तपाई हामी प्रायः सबैसँग मोबाइल छ । तर आफूले प्रयोग गरेकै भरमा त्यो मोवाइल आफ्नै नाममा हुन्छ भन्ने छैन। कतिपय मोवाइल अरुबाट पनि लिएर हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ । ती मानिसहरुको नियत नै खराब थिएछ भने त्यसैकारण फसिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। मंगलवार, फाल्गुन १३, २०७६
३० हजारमुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोन स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तर मोबाइलका लागि अधिकमा ३० हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुहोस्- हिजोआज त्यही बजेटमा पनि आकर्षक र टिकाउ स्मार्टफोन पाइन्छन् । मंगलवार, फाल्गुन १३, २०७६
बुटवलमा क्यान ईन्फोटेक २०२० शुरु बुटवलमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक शुरु भएको छ । शुक्रवार, माघ १७, २०७६
मुलुककै ठूलो सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा काठमाडौं। कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल क्यान महासंघले आयोजना गर्ने मुलुककै ठूलो सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक २०२० को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिहिवार, माघ १६, २०७६
मोबाइलको फोटो राम्रो आएन ? यी एप्स डाउनलोड गर्नुस् स्मार्टफोनको क्यामरा अब्बल हुँदै जाँदा स्मार्टफोनबाट नै फोटोग्राफी गर्न मन पराउनेहरू पनि बढ्दै गएका छन् । बिहिवार, माघ १६, २०७६
यी ५ प्रविधिले तताउँदैछन् वर्ष २०२० को बजार सूचना प्रविधिको विषयमा यस वर्ष कुन विषयले बढी चर्चा पाउला भन्ने विषयको आँकलन सुरु भइसकेको छ । बुधवार, पुष २३, २०७६
भाईरस हुनसक्छ नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईंलाई आएको उक्त म्यासेजमा क्लिक गर्नुभयो भने घण्टी भएकाे ठाउँ खुल्छ । त्यसलाई पनि क्लिक गरेमा नयाँ वर्ष २०२० को शुभकामना प्राप्त हुन्छ । सोमवार, पुष १४, २०७६
टेलिकमको नयाँ सिम किन्दा थप सुविधा काठमाण्डौं - नेपाल टेलिकमले नयाँ सिम कार्ड खरिद गर्दा थप सुविधा उपलब्ध गराउने भएकाे छ । पहिला नयाँ जीएसएम/सीडीएमए प्रिपेड सिमकार्डमा ५० रुपैयाँको ब्यालेन्स उपलब्ध हुने गरेकोमा अब त्यही मूल्यमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भएको हाे । सोमवार, पुष १४, २०७६
ओप्पोले ल्यायो एनाइन २०२० भ्यानिला मिन्ट एडिसन ओपोले नेपालमा ए-सिरिज अन्तर्गतको, एनाइन २०२०लाई नयाँ भ्यानिला मिन्ट एडिसनमा सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार, पुष २, २०७६
रिचार्ज कार्डमा नम्बर मेटियो ? यसो गर्नुस् काठमाडौं : तपाईँले लिनु भएको मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा नम्बर मेटियो, के गर्नुहुन्छ? बुधवार, पुष २, २०७६
यस्तो छ सामसङ मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य विश्व स्मार्टफोन बजारमा अग्रपंक्तिमा रहेको सामसङ नेपालमा पनि एकदमै रुचाइएको ब्राण्ड हो । बुधवार, पुष २, २०७६